Igbo Readings for Birth of John Vigil, June 23, 2020, Omumu Jon
June 23, 2020 by lectionary
1 Igbo Readings for Birth of John Vigil, June 23, 2020, Omumu Jon Omemmirichukwu
1.1 IHE OGUGU NKE MBU 1:4-10
1.2 ABUOMA NA AZIZA Ps. 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17.
1.3 IHE OGUGU NKE ABUO 1:8-12
2 Ozioma maka June 23, 2020, Omumu Jon Omemmirichukwu – Luk 1:5-17
3 Igbo Readings for Birth of John Vigil, June 23, 2020, Omumu Jon Omemmirichukwu
Igbo Readings for Birth of John Vigil, June 23, 2020, Omumu Jon Omemmirichukwu
Nke a bu Igbo Mass Readings for Birth of John Vigil, June 23, 2020, Omumu Jon Omemmirichukwu, nke ndi Catholic Lectionary wetara unu.
IHE OGUGU NKE MBU 1:4-10
Ihe Ogugu e wetara n’akwukwo onye Amuma Aizaya
Okwu nke Chineke biakwutere m na-asi: “Tupu a turu ime gi, amarala m gi, tupu a muo gi, edoola m gi nso; ahoputakwala m gi ka onye amuma nke mba niile.”
A zara m ya si, “Ah! Oseburuwa Chineke! Lee amaghi m ka e si ekwu okwu n’ihina m bu nwata.”
Mana Oseburuwa gwara m si, “Ekwukwala na I bu nwata; I ga-agakwuru ndi niile m ga-ezigara gi, I ga-ekwukwa ihe obula m gwara gi.
Atukwala ha egwu n’ihina m nonyere gi izoputa gi, Oseburuwa na-ekwu. Ma Oseburuwa setiri aka ya metu n’onu m, wee gwa m si, “Lee etinyela m okwu m n’onu gi.
Lee ezipula m gi taata n’ime mba niile nakwa ochichi niile, ka i toputa ma kutuo, ka I mebie ma weghara ochichi niil, ka I ruzie ma kuokwa.”
ABUOMA NA AZIZA Ps. 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17.
Aziza: I burii oke m site n’afo nne m.
Na gi, Onyenweanyi ka m gbabara
Ekwela ka ihere mee m,
N’eziomume gi, gbaputa m, zoputa m,
Gee m nti zoputa m! Aziza
2. Buru okwute nke mgbaba m,
Mgbidi aja nke ga-azoputa m,
N’ihina I bu okwute m, nchedo m,
Chineke m, zoputa m n’aka ndi ajo mmadu,
N’onya nke ndiiro na nke ndi ochichi aka ike! Aziza
3. N’ihina so gi, Onyenweanyi bu nchekwube m,
Onyenweanyi echekwubere m na gi bido na mgbe m di na okorobia,
Atukwasara m gi obi na mgbe a muru m,
I burii oke nke m site n’afo nne m. Aziza
4. Onu m ga-ekwuputa eziomume gi,
Na ike nke nzoputa gi ubochi niile,
O Chineke, I kuziri m bido na nwata m,
Aga m na-ekwuputa oru ebube gi. Aziza
IHE OGUGU NKE ABUO 1:8-12
Ihe gugu e wetara n’akwukwoozi mbu Pita di aso dere
O bu ezie na unu ejibeghi anya unu hu ya, ma unu huru ya n’anya. O bukwa ezie na unu anaghi ahu ya anya ugbu a, ma unu kwere na ya.
N’ezie, obuladi ugbu a, unu nwere obi nke juputara n’onu ahu nke onu na apughi ikowa. Ugwo oru unu ga-enweta n’ihi ntukwasi obi unu n’ime ya ga-abu nzoputa nke mkpuruobi unu.
Ihe banyere nzoputa a ka ndi amuma chosiri ike, jukwaa ajuju banyere ya. Ha bukwara amuma banyere amara ahu nke Chineke ga-enye unu.
Ha gbara mbo ichoputa ihe mmuo Kristi ahu bi n’ime ha na-ekwu, n’ihina o burula uzo gbara ha ama banyere ahuhu niile Kristi ga-ahu na ebube niile ga-eso ya.
Chineke mere ka ha mata na oru ha ruru n’uwa abughi maka odimma nke onwe ha, kama maka nke unu. Ha ruuru unu oru nke a mgbe ha gwara unu okwu banyere ihe ndi ahu, nke ndi na agbasa ozioma na agwakwa unu ugbu a.
Ha gwara unu ya site na ike nke Mmuo Nso, nke e siri n’eluigwe zita. Ihe ndi ahu bukwa ihe ndi mmuooma n’onwe ha chokwara imata.
O biara igba ama, igbara ihe ahu akaebe, bia kwadobere Chineke ndi nke ya.
Ozioma maka June 23, 2020, Omumu Jon Omemmirichukwu – Luk 1:5-17
Ihe Ogugu nke a si n’Ozioma di aso nke Luk dere
N’oge eze Herod na-achi ala Judia niile, e nwere out onye nchuaja aha ya bu Zekaria. O so n’out ndi oje ozi nke Abija.
O nwere nwunye aha ya bu Elizabet, onye si n’agburu Eron, onye isi nchuaja. Di na nwunye a bun di eziomume n’ihu Chineke.
Ha na-edobe iwu niile na ukpuru niile nke Onyenweanyi, n’enweghi ntupo. Ma ha amutaghi nwa, n’ihina Elizabet bu nwaanyi aga.
Ya na di ya emekwaala agadi. Mgbe Zekaria no na-eje ozi n’ihi Chineke oge ndi otu ya ketara iga ozi, ka usoro omenaala ndi nchuaja si di, o manyere Zekaria ibanye ebe nchuaja di n’ulonso nke Chineke kpoo mgbaisioma oku.
Oha ndi Juu niile no n’ezi na-ekpe ekpere n’oge aja mgbaisioma ahu. N’ebe ahu ka mmuooma nke Oseburuwa biakwutere ya, guzoro n’akanri nke ekwuaja mgbaisioma ahu.
Mgbe Zekaria huru ya, obi mmapu na ujo jidere ya. Ma mmuooma ahu siri ya, “Atula egwu, Zekaria n’ihina a nula ekpere gi; Elizabet nwunye gig a-amutara gi nwa nwoke.
I ga-akpokwa ya Jon. I ga-enwe onu na obi uto; otutu mmadu ga-enwe anuri n’omumu ya; n’ihina o ga-abu onye di ukwu n’ihi Chineke.
O gaghi anu mmanya obula mobu ihe onunu obula na-egbu egbu. O ga-ejuputakwa na Mmuo Nso, o buladi site n’afo nne ya.
O ga-eme ka otutu umu Izrel loghachi azu n’ebe Chukwu ha no. O ga-aga ikwadoro Dinwenu uzo. Nudi mmuo na ike nke onye amuma Elaija, ka o ga-eji tugharia obi ndi bu nna n’ebe umu ha no.
Meekwa ka ndi isi ike tugharia obi, lekwasi anya n’amamihe nke ndi eziomume, bia kwadobere Chineke ndi nke ya.”
IHE OGUGU UNYAHU: Mondee, Izu Nke Iri Na Abuo N’oge Na-Adanyeghi N’emume
IHE OGUGU ECHI: June 24, 2020, Emume Omumu Jon Omemmirichukwu
Sonyere Anyi na Facebook @ Catholic Lectionary
Categories Igbo Mass Readings Post navigation
Igbo Readings for Immaculate Heart, June 20, 2020, Obi Maria Ebughi Njo
Igbo Readings Maka Omumu John, June 24, 2020, Omumu Jon